गत वर्ष मात्रै एक अर्ब ८१ करोडको भन्सार छुट लिएका निजी अस्पतालले संकटका वेला जनताका लागि गेट बन्द गरे – HostKhabar ::
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेल भन्छन्–बिरामी जाँच्दिनँ भनेर पन्छिने छुट निजी अस्पताललाई छैन
काठमाडौं : जनतालाई सस्तो र सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिन भन्दै सरकारी र निजी अस्पतालहरूले प्रत्येक वर्ष राज्यबाट भन्सार छुट लिइरहेका छन् । गत वर्षमात्र ११ अर्ब ७० करोड २३ लाखको सामग्री खरिद गर्दा एक अर्ब ८१ करोड ३८ लाख भन्सार छुट लिएका निजी अस्पतालले अहिले जनता संकटमा पर्दा गेट बन्द गरेका छन् । आंशिक रुपमा खुलेका कतिपय अस्पतालले रुघाखोकी र ज्वरो आएकालाई मात्र होइन, पखाला लागेका र ढाड दुःखेका बिरामीलाई पनि भर्ना गर्न छाडेका छन् ।
निजी अस्पतालहरूले पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट (पिपिई)को अभाव देखाउँदै बिरामी फिर्ता पठाउने क्रम बढेपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अनुगमन थाल्ने भएको छ । यस विषयमा आधिकारिक धारणा बनाउन मंगलबार काउन्सिलको बैठक बस्दै छ ।
आकस्मिक कक्षमा सेवा लिन आएका बिरामीलाई कुनै पनि बहानामा फर्काउन नपाइने काउन्सिलले जनाएको छ । ‘आकस्मिक कक्षमा आएका बिरामीको वर्गीकरण गर्नु अस्पतालको पहिलो कर्तव्य हो । कोरोनाको लक्षणजस्तो देखिए टेन्टमा राखेर थप जाँच गर्ने, नभए सीधै आकस्मिक कक्षमा लगी उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसरी वर्गीकरण गरेमा पिपिईको आवश्यकता पर्दैन । शंकास्पद बिरामी हेर्दा मात्रै लगाए पुग्छ,’ काउन्सिलका प्रवक्ता डा. कृष्ण अधिकारीले भने ।
आकस्मिक सेवा रोकेर मान्छे मार्ने काम अस्पतालहरूले गर्न नहुने काउन्सिलले जनाएको छ । तर, ज्वरो र रुघाखोकी लागेर आएका बिरामी भने सीधै आकस्मिक कक्षमा लान नहुने काउन्सिलको तर्क छ । जोखिममा काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीदेखि अस्पतालका कर्मचारीहरूसम्मलाई घर पठाउने होइन, सुरक्षित स्थानमा राख्ने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने काउन्सिलले जनाएको छ ।